Ukusetyenziswa kweprojekthi yeSjHZS90-3B Xixiayuan yoLondolozo lwaManzi | Shantui
Ukusetyenziswa kweprojekthi yeSjHZS90-3B Xixiayuan yoLondolozo lwaManzi
Ixesha lokwakha: Septemba 2020
Intsimi yesicelo (uhlobo lobunjineli): ezolimo, amahlathi kunye nokugcinwa kwamanzi
SjHZS90-3B isamente silo silo endala yoMthengi.
NgoSeptemba 2020, izityalo ezibini zekhonkrithi zeSjHZS090-3B zeShantui Janeoo zigqibe ngempumelelo ukufakwa kunye nokugunyaziswa kwaye zanikezelwa kubathengi kulwakhiwo lweProjekthi yeXixiayuan Conservancy Project.
Ukuthembela kwizibonelelo zokuchaneka komlinganiso ophezulu kunye nokusebenza okufanelekileyo, inkampani yokuvelisa ikhonkrithi yenkampani ivelisa ikhonkrithi ekumgangatho ophezulu wezinto ezahlukeneyo ngokweemfuno zabathengi, ukubonelela ngezixhobo ezaneleyo zokwakha iiprojekthi zokugcina amanzi zeXixiayuan kunye nokukhupha imithombo yamandla. Esi ikukusetyenziswa okuyimpumelelo kwezixhobo zenkampani kwiiprojekthi ezinkulu zolondolozo lwamanzi kuzwelonke emva kweProjekthi yokuHanjiswa kwaManzi eCentral Yunnan.
Iprojekthi yokuLondolozwa kwaManzi iXixiayuan yenye yeeprojekthi zolondolozo lwamanzi zikazwelonke ezili-172 kunye neeprojekthi zonikezelo lwamanzi. Iprojekthi idibanisa ukuveliswa kwamandla kwaye ithathela ingqalelo usetyenziso olubanzi lonikezelo lwamanzi kunye nokunkcenkceshela. Ukuhamba okungazinzanga kwamanzi okuphuma kwiXiaolangdi Reservoir kuguqulwa kwaba kukuhamba okuzinzileyo kokuqinisekisa ukuhamba okuqhubekayo koMlambo oMthubi. Kwangelo xesha, ikwasusa ngokusisiseko isitshixo seXiaolangdi Hydropower Station yokucheba kwimilambo esezantsi. Iimpembelelo zidlala indima ebalulekileyo kwindalo, ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo, kunye nemveliso yemveliso yezolimo kunye nezolimo.